रेवतीप्रसाद भुसाल - rabati prasad bhusal | Nagarik News - Nepal Republic Media
निर्वाचनको माहोल बनाउन जनता र कार्यकर्तामा आशा जगाउने सन्देश दिनु जरुरी छ। पार्टीभित्रको असहयोगी भावना अन्त गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि सभापतिलाई भरपर्दोराजनीतिक सहयोगी आवश्यक छ।
रेवतीप्रसाद भुसाल, गणेश बहादुर खड्का, विष्णुराज आचार्य र टंकप्रसाद शर्मा कँडेल २३ पुस २०७८ शुक्रबार ७ मिनेट पाठ
एक दुखान्त नाटक
पौडेल समूहका सबै नेताले नायक बन्ने अभिनय गरे। संघर्ष पनि गरे। जनता तथा कार्यकर्तालाई आकर्षित गरे। तर, आफैँले कार्यकर्तालाई दिएको वचन तथा आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति इमानदार रहेनन् ।
रेवतीप्रसाद भुसाल २ पुस २०७८ शुक्रबार ७ मिनेट पाठ
कांग्रेस अधिवेशन: उत्साहमा परिणत गरौँ
नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनले कार्यकर्तामा उत्साह उत्पन्न गर्नुपर्ने हो। नेतृत्वको कार्यशैलीले १४औँ अधिवेशनको सुरुवातबाटै कार्यकर्ता निरुत्साहित बनेका छन्।
रेवतीप्रसाद भुसाल १० कार्तिक २०७८ बुधबार ८ मिनेट पाठ
सत्ता गुमेपछि ओलीका आक्रोश
माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरेको भए जनादेशको सम्मान पनि हुने र कांग्रेसको साख पनि बढ्ने थियो।
रेवतीप्रसाद भुसाल २९ श्रावण २०७८ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेमतोमा संविधान उल्लंघन गरेको विषयमा सर्वोच्चमा बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यले रिट निवेदन दिएको अवस्थामा प्र.न्या.को प्र.म.सँग मध्यरातमा अपारदर्शी भेट भएको समाचार चुहिनु र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आउनु नेपालको लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणालीमाथि कालो बादल मडारिनु हो।
रेवतीप्रसाद भुसाल १९ जेष्ठ २०७८ बुधबार ८ मिनेट पाठ
लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। परिणाम दिन सकेन भनेर लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न सकिँदैन। आहारबिहार राम्रो भएन भने जीवित शरीरमा रोग लाग्छ। रोग लाग्यो भनेर के जीवनको विकल्प खोज्न सकिन्छ र ? रोगको उपचार गरिन्छ।
रेवतीप्रसाद भुसाल २१ वैशाख २०७८ मंगलबार ७ मिनेट पाठ
आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै एक मित्रसँग कुरा गर्दै थिएँ । उहाँले कांग्रेसको अहिलेको स्थितिप्रति असन्तुष्टिसूचक प्रश्न गर्नुभयो– कांग्रेसले यो के गरेको ? कस्तो राजनीति हो ? मैले फ्याट्ट भनिहालेँ– मित्र यो वैश्य युग हो । कांग्रेसले युगअनुसारको ‘बनियाँ राजनीति’ गर्दैछ । शब्द मेरो मुखबाट फुत्किसकेको थियो ।
रेवतीप्रसाद भुसाल ११ माघ २०७७ आइतबार ८ मिनेट पाठ
अतितजीवी उत्साहमा ओली उन्माद
हालसालै नेपालका ठूला सहरहरूमा राजावादीहरूले रमाइलो गर्दै थिए । कोरोनाका कारण नेपालीले कार्तिकनाच हेर्न पाएका थिएनन् । त्यसको रहर राजावादीले मेटाइदिएका थिए । नेकपाको सरकार बनेयता कुनै राजनीतिक दलले देश र नागरिकका समस्या समाधान हेतु दबाबमूलक प्रदर्शन गरेका थिएनन् ।
रेवतीप्रसाद भुसाल १४ पुस २०७७ मंगलबार १० मिनेट पाठ
नेपाली कांग्रेसका लागि कस्तो सभापति ?
नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिलेसभापति को बनाउने भन्ने नसोची कस्तो व्यक्तिलाई सभापति बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ।
रेवतीप्रसाद भुसाल ६ कार्तिक २०७७ बिहीबार ८ मिनेट पाठ
रेवतीप्रसाद भुसाल ९ आश्विन २०७७ शुक्रबार १० मिनेट पाठ
रेवतीप्रसाद भुसालका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्